Caalamka, 30 May 2017
Talaado 30 May 2017
Qaraxyo ka Dhacay Baghdad oo lagu Dilay 27 Qof
Laba qarax oo kala duwan oo ka dhacay waddooyin aad u mashquul badan oo ku yaalla magaalada Baghdad ee caasimadda Ciraq ayaa dilay ugu yaraan 27 qof, waxaana ku dhaawacmay tobaneeyo kale.
Ciidamada Philippine oo Galay Magaalo ay Haystaan Abu Sayyaf
Ciidamada Philippine ayaa maanta galay magaalo la haysto oo ku taalla jasiiradda koonfureed ee Mindanao, si ay halkaas uga nadiifiyaan dagaalyahano Islaami ah oo qabsaday horraantii toddobaadkan.
Philippines: Xagjiriin Dad ku Dhex Qafaashay Kaniisad
Xagjiriin muslimiin ah oo ku sugan dalka Philippines ayaa afduubtay baadari iyo dhowr qof oo kale oo ku sugnaa kaniisad ku taalla magaalada Koonfureed ee Marawi.
Ninkii Fuliyey Weerarka Manchester oo la Aqoonsaday
22 Qof oo ku Dhintay Qarax ka Dhacay Magaalada Manchester
Ugu yaraan 22 ruux ayaa ku geeriyootay, ku dhawaad 59 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu qarax weyn xalay ka dhacay goob uu ka socday bandhig faneed, oo ku taalla magaalada Manchester, ee dalka Ingiriiska.
Fallanqeyn: Saameynta Weerarkii Manchester
Weerarka ayaa walaac badan ka dhaliyay dalka Britain, iyada oo lagu tilmaamay mid ka mid ah weerardii ugu weynaa ee dhawaanahan ka dhaca dalkaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta wacad ku maray inuu sameyn doono wax kasta oo uu awoodo, si uu nabad uga dhaliyo Bariga Dhexe.
Erdogan oo Kordhiyey Xaaladda Deg Degga ee Turkiga
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sii kordhiyey waqtiga xaaladda deg degga ah ee dalkaas lagu soo rogay kadib afgambigii dhicisoobay ee bishii July ee 2016 ka dhacay dalkaas.
Trump oo la Hadlaya Madaxda Dalalka Islaamka
Waxaa goor dhow bilaabanaysa khudbad uu shirka Carabta iyo Islamaka iyo Maraykanka u jeedinayo Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo booqashadiisii ugu horraysay ku jooga dalka Sucuudiga.
Iiraan: Xasan Ruuxaani oo xilka mar kale loo doortay
In kabadan 20 Milyan oo kamid ah shacabka Iiraan ayaa maanta Xasan Ruuxaani Madaxweyne u doortay.